HomeWararka Ciyaaraha MaantaJuventus oo diiday dalabkii Chelsea iyo Barcelona ee Matthijs de Ligt
May 10, 2021 Wararka Ciyaaraha Maanta, Horyaalka Italy, Suuqa kala iibsiga 0
Juventus ayaa lagu soo waramayaa inay ka soo horjeesatay isku daygii kooxaha Chelsea iyo Barcelona ee ahaa inay Matthijs de Ligt ku abaalmariyaan meel ka baxsan garoonka Allianz Stadium xagaagan.
Iyagoo laga qaaday horyaalnimada Serie A isla markaana booskooda Champions League aan weli la xaqiijin, tababaraha kooxda Juve Andrea Pirlo ayaa loo maleynayaa inuu qorsheynayo inuu xagaaga u dhaqaaqo xagaaga.
De Ligt ayaa la dhibtoonayay dhaawacyo bilowgii ololaha, laakiin tan iyo markaas wuxuu noqday laacib muhiim u ah Old Lady, isagoo ciyaaraya 90-ka daqiiqo sagaalkii kulan ee ugu dambeeyay horyaalka.
Sida laga soo xigtay Tuttosport , Juventus ayaa u aragta De Ligt xidig muhiim u ah kooxda Turin ka dhisan waxayna ay diideen dalabyada uga yimid Chelsea iyo Barcelona ee ku aadan 21 jirkaan.
Warbixinta ayaa intaa ku dareysa in Juve ay diyaar u tahay inay u ogolaato De Ligt inuu ku baxo qiimaha saxda ah, laakiin waxaa laga sugayaa inay dalbadaan lacag ka badan tii hore oo aheyd 67.8m oo ay ku iibsadeen isaga 2019.
Ciyaaryahankii hore ee Ajax ayaa qandaraas kula jira Juventus ilaa 2024, waxaana uu dhaliyay shan gool 70 kulan oo uu u saftay Old Lady ilaa iyo haatan.